Amiirkii xilka boqortooyada Ingriis isaga tagay oo shaqo cusub ka helay Mareykanka – Calanka.com
Amiirkii xilka boqortooyada Ingriis isaga tagay oo shaqo cusub ka helay Mareykanka
in Dibedda — March 24, 2021
Amiir Harry ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inuu “runtii aad ugu faraxsan yahay” qabashada xilkan cusub.
“Saameynta ka dhalata caadiska qorsheysan iyo kala sooca ayaa ah sababta ugu xanuunkabadan,” waxaa sidaasi barteeda Instagram-ka kusoo qortay Serena Williams, oo ah ciyaaryahanad Teeniska ciyaarta, oo saaxib la ah Meghan.
Boqortooyada UK ayaa sheegtay in sheegashadu ay tahay “mid khuseysa “, laakiin si gaar ah wax looga qaban doono. Horraantii toddobaadkan, Boqortooyada ayaa sheegtay in dib u eegis lagu sameynayo kala duwanaanshaha ka dhex jiro dhammaan qoysaska boqortooyada.
Wuxuu sidoo Amiir Harry bayaankiisa ku sheegay in hadafka shaqadiisa cusub ay noqon doonto “in kor loo qaado wada hadalada xasaasiga ah ee ku saabsan caafimaadka maskaxda, in la dhiso bulshooyin taageero iyo naxariis leh, lana kobciyo dadaalada wax loogu qabanayo dadka qaba xanuunada maskaxda.
Wuxuu noqonayaa qofkii ugu horreeyay ee shirkaddan xilka noocan ah u magacowdo, amiir Harry waxaa laga filayaa inuu talo ku yeesho dadaallada ay ka mid yihiin go’aanada dhanka istiraatiijiyadda wax soo saarka iyo bixinta deeqaha, wuxuuna si guud uga qayb qaadan doona ololaha la xiriira deeqaha lagu kabayo dadka saamaynta ay ku yeesheen xanuunadan.